Guddoomiyaha Gaalkacyo oo diiday in uu xilka wareejiyo
Buluugleey July 23, 2005
Magaalada Gaalkacyo waxaa la soo deristay xiisad colaadeed oo circa isku shareertay markii uu Jen. Cadde Musse soo saaray wareegto cusub oo uu ku magacaabayo Sheekh Daahir Jaamac Nuur inuu noqdo Guddoomiyaha cusub ee magaalada Gaalkacyo. Waxaa kaloo wareegtada ku xusneyd in guddoomiyihii hore mudane Maxamed Warsame Jabhad uu hanan kari waayey ammaanka guud ee magaalada Gaalkacyo isgoo loo cuskaday xil ka qaadistaasa inuu diiday inuu xoog ku maquuniyo malleeshiya beeleedkii ciidamada Col. Cabdullahu Yusuf ka faramaroorsaday maxbuuskii ugu xukunaa toogashada.
Wararka ayaa shgeegaya in guddoomiyihii hore ee magaalada Gaalkacyo Maxamed Warsame Jabhad uu diiday inuu xilka wareejiyo taas oo sii xumeyneysa xiisadaha siyaasadeed ee maalmahan ka taagan magaalada Gaalkacyo.
Warark ianaga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya inta uu Col. Cabdullahi Yusuf ku suganaa magaalada Gaalkacyo in lagu dilay lix qofood oo rayid ah haddana waxaa laga cabsi qabaa in markale ay iskaga horyimaadaan malleeshiyo beeleed iyo ciidanka Col. Cabdullahi Yusuf.
Warar aan ka soo xiganay HornAfrik ayaa sheegaya in hotelka Taar City oo Col. Cabdulaahi Yuusuf degan yahay in ammaankiisa la adkeeyey iyadoo halkaas la geeyey ilaa shan boqol oo boolis iyo askar kale. Dadkii hoteelka deganaa ayaa dhammaantood laga saaray iyadoo la soo dejiyey ilaalada gaarka ah ee Col. Cabdullahi Yusuf.
Dadka deggan magaalada Kaalkacyo ayaa baqadin la soo diristay iyada oo u muuqato haddii uu dagaal ka dhex qarxo magaalada ay keeni karto inuu dhiig fara badani daato, taasina waxay abuuri kartaa deggenaashaha la'aanta gobolka Mudug.